दलितलाई मठ–मन्दिर सहित व्राम्हणको घर भित्राउँदै गुल्मी कांग्रेस/मदिरा नियन्त्रणमा महिला अभियान ! – ebaglung.com
दलितलाई मठ–मन्दिर सहित व्राम्हणको घर भित्राउँदै गुल्मी कांग्रेस/मदिरा नियन्त्रणमा महिला अभियान !
२०७५ जेष्ठ १, मंगलवार १४:३९	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७५ जेठ १ । नेपाली कांग्रेस गुल्मीले नयाँ वर्ष २०७५ को वैशाख १ गतेबाट सुरु गरेको गाउँ जाउँ गाउँ मै रमाऔं ५० दिने महाअभियानको पहिलो चरणको तिन हप्ते कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न पहिलो चरणको अभियानले सकरात्मक सन्देश दिन सफल भएको कांग्रेसको समिक्षा बैठकले निश्कर्ष निकाले पनि विपक्षीहरुको टिका–टिप्पणी उसका लागि चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ ।
उनले गाउँपलिका स्तरमा जनचेतनामुलक ¥याली निकाल्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रम रहेको बताईन् । उनले सञ्चार माध्यमले व्यापारिक विज्ञापन विज्ञापन दिदा दाईजो प्रथालाई प्रशय दिदै आएकोले त्यसलाई रोक्न आग्रह गरिन् ।
तस्वीरः मंगलवार विहान पार्टी कार्यालयको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुल्मी कांग्रेस नेतृत्व
आजको तस्वीर : चढ्दो गर्मी, बढ्दो फोहर, यस्तैछ बागलुङ नगर… !